China, Yakasarudzika, Hunhu Ballerina tutu, Ballerina koshitomu, Ballet tutu, Adult ballet tutu, Pancake tutu koshitomu, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori.
Makore makumi maviri ekugadzira uye ekugadzira ruzivo
anenge 800 zvidimbu pamwedzi
Tinotsigira mufanidzo kana mharidzo customization
Tsigira DHL / EMS / SEA nedzimwe nzira dzekufambisa
Pakati Pakati Ballet Pointe Shoes
Fitdance Ballet Kupfeka Fekitori
Yakagadzwa mu1999ï¼ŒFitdance ballet fekitori uyo ari nyanzvi mukugadzirwa, kugadzirwa uye kutengesa kwekutamba kupfeka, uye ane mukurumbira wepamusoro muChinese yekutamba juear indasitiri.Zvedu zvikuru zvigadzirwa zvinosanganisira ballet tutu, ballet masiketi, yekutamba leotard uye zvimwe zvipfeko. Uye shangu dze ballet, tights dze ballet uye zvimwe zvishongedzo. Zvigadzirwa edu aivigirwa kunyika dzakawanda uye kumatunhu akadai mhiri kwemakungwa North America, Russia, Australia, Canada, Japan, South Korea, etc. uye vakagamuchirwa zvakanaka vatengi kumba uye kunze. Kune mabheseni maviri ekugadzira muGuangdong neHubei, ine vashandi mazana maviri.Vashandi vedu vane vanogadzira emhando yepamusoro, mamaneja uye maMarketera ayo anogona kuvhenekesa basa rekuvimbika uye mhando yepamusoro zvigadzirwa.Takatanga bhizinesi rekutengesa kunze kubva kumakambani, zvigadzirwa zvinotumirwa kune dzimwe nyika kwese. nyika. Anovimbwa zvakadzama uye anodikanwa nemasangano ekudzidzisa, nyanzvi nevashandisi. Mumakore achangopfuura, Fitdance ballet fekitori rave iro rine mukurumbira mhando yekutamba kupfeka kugadzirwa uye kutengesa, uye tarisiro yayo yekusimudzira uye kukosha kwekutengeserana kuri kubuda zvishoma nezvishoma.
Pakutanga kweiyo Romantic Ballet nguva, zvipfeko zveballet zvakatanga kutungamira mafashoni, senge Tarrioni's "Fairy" bvudzi uye "Fairy" headwear, uye vakadzi veParisiti vakamhanyira kutevedzera maitiro ake, nevagadziri vefashoni vachizivisa akakurumbira "ngano ngowani" zvichibva paari chimiro.
Kutaura nezve basa re ballet TUTU siketi
Ballet TUTU siketi ndiyo inonyanya kuoneka dhanzi dhizaini mune yechinyakare ballet, iyo yakatorwa kubva kune ballet siketi yaLouis XIV. TUTU inogadzirwa neshinda yakakosha uye yakaumbwa sepancake. Iyo inoyevedza inowirirana uye inowirirana.
Ballet tutu zvipfeko zvakajairwa
Ballet Tutu siketi: chipfeko chakajairwa cheballerinas. Inosanganisira mana kana mashanu matete e silky kana nylon makwikwi, siketi yacho yakasungirirwa kune yakashongedzwa, yakakura vheti.
Isu tiri vechokwadi nezvechigadzirwa.Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu, ndapota email nesu uye tichakupindura kwauri mukati maawa 24